Wararka Maanta: Arbaco, Jun 12, 2013-Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada London iyo dalka Malaysia oo dhigay dibadbax iyo baroordiiq (SAWIRRO)
Magaalada London ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal Soomaali ah oo ku qaylinayo erayo ay ku codsanayeen in lagu joojiyo dhibaatooyinka Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika lagu hayo.
Dibadbaxayaasha ayaa waxay qaarkood wateen boorar ay ku qoran yihiin: “Waa in la joojiyo dilalka lagu hayo Soomaalida” Sidoo kale waxay wateen calanka Soomaaliya, waxaana mudaaharaadkan uu ahaa mid la dareemay bartamaha magaalada London.
Waddanka Koonfur Afrika ayaa toddobadyadii ugu dambeeyay waxaa dilal loogu geystay lix qof oo Soomaali ah, kuwaasoo mid ka mid ah lagu dilay dhagax, waxaana taasi ay kicisay Soomaalida ku nool caalamka oo dhan, iyagoo dhigay dibadbaxyo waxaana meelaha ay ka dhaceen ka mid ahayd magaalada Muqdisho.
Dhanka kale, kulan ay kazoo qaybgaleen Soomaalida wax ku barta iyo kuwa ku nool dalka Malaysia ayaa xalay ka dhacay magaalada Kuwalalambur ee dalkaas, kaasoo loogu baroord-diiqayay Soomaalidii lagu dilay dalka Koonfur Afrika.
“Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo shacabka Koonfur Afrika inay joojiyaan dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka Soomaalida ah ee dalkooda ku nool, waana inay xusuustaan taageeradii ay u gashay Soomaaliya xilligii ay ku jireen gumeysigii midab-kala-sooca ahaa,” ayay yiraahdeen dadkii kasoo qaybgalay baroordiiqda.
Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa haween mayo-cad madaxa ku xirtay kuwaasoo xambaarsanaa boorar ay ku qoran yihiin: “Waa in la joojiyo dialka loo geysnayo Soomaalida Koonfur Afrika ku nool” iyo "Waa in Soomaalida Koonfur Afrika ay hesho cadaalad."
Sidoo kale, dadkan waxay wateen calanka Soomaaliya oo ay luxayeen iyo calanka dalka Koonfur Afrika oo dhiig ku daadsan; waxaana haweeney waayeel ah oo ka mid ahayd dadkii kasoo qaybgalay dibadbaxa ay sheegtay iyadoo ilmaynaysa inay aad uga xun tahay dhibaatooyinka Soomaalida loogu geysnayo Koonfur Afrika.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan qoraal ay u dirtay xukuumadda Koonfur Afrika waxay kaga dalbatay inay faragelin ku sameyso dilalka iyo dhaca lagu hayo Soomaalida ku nool dalkooda, ayna baaris ku sameyso kuwa geysanaya falalkaas si sharciga loo horkeeno.